फोटोहरूलाई टेक्स्ट फाइलमा रूपान्तरण गर्नका लागि शीर्ष ५ अनलाइन उपकरणहरू - Print Peppermint
अप्रिल 25, 2022 | नि: शुल्क संसाधन, स्वतंत्र, उत्पादकता
अनलाइन OCR उपकरणहरू आज कुनै पनि लेखकको शस्त्रागारमा एक उल्लेखनीय थप हो। त्यसोभए, उनीहरूले २०२२ मा कसरी र कुन प्रयोग गर्नुपर्छ?
तस्बिरहरूलाई सम्पादनयोग्य पाठहरूमा रूपान्तरण गर्नु कुनै पनि व्यवसाय वा लेखकको स्ट्यासको लागि एक उल्लेखनीय थप हो। यी उपकरणहरूले भविष्यका प्रयोगहरू र थपका लागि छविहरूलाई सम्पादनयोग्य पाठहरूमा रूपान्तरण गरेर जीवनलाई सजिलो बनाउन सक्छ।
अनुसार विशेषज्ञहरु, यही कारणले गर्दा यो प्रविधि 2022 मा अझ लोकप्रिय हुनेछ। त्यसैले यो लगभग सबैका लागि प्रयोग गर्न अनिवार्य र आवश्यक प्रविधि हो। किन?
व्यवसायहरूलाई यसको आवश्यकता छ
बजारहरूले यसलाई मन पराउँछन्
विद्यार्थीहरूले यसलाई जीवनरक्षकको रूपमा प्रशंसा गर्छन्
एकेडेमीहरूले यसलाई डाटा भण्डारण गर्न प्रयोग गर्छन्
यी OCR उपकरणका फाइदाहरूको मात्र अंश हुन्, जसलाई हामी केही पछि विस्तारमा छलफल गर्नेछौं। तर, यदि तपाइँ गुगल ओसीआर उपकरणहरू गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले यो जस्तै धेरै परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ:
ती धेरै धेरै छन्। त्यसोभए, तपाइँ कसरी एक छान्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो मिल्छ? वा, OCR लाभहरूको लागि तिनीहरूमध्ये कुन उत्तम हो? आउनुहोस् खन्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्:
OCR कसरी काम गर्छ?
OCR मा विभिन्न तत्वहरू छन् जुन अन्तिम परिणाम उत्पादन गर्न सँगै काम गर्दछ। त्यसैले यो सबै कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। त्यो किन हो? किनभने त्यसोभए यसले तपाइँलाई राम्रो उपकरण कसरी छनौट गर्ने भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ, जसको बारेमा हामी केही समयमै कुरा गर्नेछौं।
त्यसोभए, यहाँ OCR उपकरणको तीन प्राथमिक तत्वहरू छन्:
OCR उपकरणको स्क्यानिङ खण्डले तपाईंलाई यो कति राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यो उपकरणले के गरिरहेको छ भनी बताउँछ, जस्तै यसले गर्छ:
यो उपकरणले यसलाई जस्तै स्क्यान गर्छ र पछि पाठको साथ प्रस्तुत गर्दछ। त्यसोभए, यो IWR, OCR, वा ICR प्रविधि प्रयोग गर्दैछ भन्न सुरक्षित छ, जसलाई हामी अलिकति व्याख्या गर्नेछौं।
NLP वा प्राकृतिक प्रशोधन भाषा आजको लेखन वा स्क्यानिङ उपकरणमा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। यसले मेसिनहरूलाई मानव भाषाहरू पढ्न मद्दत गर्दछ, अर्थात्, हाम्रा भाषाहरू जस्तै अंग्रेजी, स्पेनिस, र यस्तै अन्य। यो भाषा हो जसले मेसिन-स्क्यान गरिएको पाठलाई स्क्यान गरिएको कागजातमा भएको भाषामा रूपान्तरण गर्छ।
सम्पादन योग्य पाठ
कुनै पनि OCR उपकरणको अन्तिम चरण भनेको तपाईलाई सम्पादन योग्य पाठ प्रदान गर्नु हो। जस्तै:
यो हामीले पहिले प्रयोग गरेको एउटै उपकरण हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पाठ कर्सर द्वारा चयन गरिएको छ, यो अब सम्पादन योग्य छ भनेर संकेत गर्दछ। यो अन्तिम खण्ड हो जुन तपाईंले कुनै पनि OCR उपकरणमा देख्नुहुनेछ। यस भागमा, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, तपाईंसँग निम्न विकल्पहरू हुनेछन्:
म्यानुअल रूपमा प्रतिलिपि गर्दै
क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्दै
कागजातको रूपमा बचत गर्दै
सुरक्षित गरिएका कागजातहरू प्रायः TXT वा DOCX ढाँचामा हुन्छन्
त्यसोभए, OCR उपकरणले छविहरूबाट पाठ निकाल्ने र काम गर्ने तरिका हो। त्यसपछि, यसले तपाईंको मनपर्ने अनुसार निकालिएको पाठ बचत गर्न सक्छ। यद्यपि, धेरैजसो उपकरणहरूले केवल दुई ढाँचाहरू, अर्थात्, TXT वा DOCX प्रस्ताव गर्दछ।
कुन प्रकारका OCR उपकरणहरू छन्?
OCR उपकरणहरू आज तिनीहरूमा सबै आवश्यक तत्वहरू छन्। कोही तस्बिरहरूबाट पाठ निकाल्छन्, अरूले यसलाई PDF बाट निकाल्छन्, जबकि कोहीले दुवैतिर लाग्छन्। यद्यपि, यी सबै उपकरणहरू त्यस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रविधिहरूमा भर पर्छन्।
यहाँ त्यस्ता OCR उपकरणहरू द्वारा प्रयोग गरिएको पृष्ठभूमि प्रविधिहरू छन्:
IWR र ICR
IWR वा बौद्धिक शब्द पहिचान एक AI-उत्साहित OCR तत्व हो, जसले दुबै हात र टाइप गरिएको पाठ वा कागजबाट पाठ निकाल्छ। यो प्राथमिक प्रविधि हो जुन धेरै जसो OCR उपकरणहरूले आज प्रयोग गर्दछ।
यस प्रविधिको सानो भाइ ICR, वा बुद्धिमान शब्द पहिचान हो। यो उपकरणले छवि वा कागजमा उपस्थित प्रत्येक क्यारेक्टरहरू पहिचान गरेर पाण्डुलिपिहरूबाट सामग्री अवशोषित गर्दछ।
यी दुबै प्रविधिहरू आज कुनै पनि OCR उपकरणको प्राथमिक कोर हुन् किनभने तिनीहरूले मेसिन र मानवद्वारा लेखिएका पाठहरू निकाल्छन्।
OMR र OWR
OMR, उर्फ ​​अप्टिकल मार्क पहिचान, आज कुनै पनि OCR उपकरणको प्राथमिक यन्त्रहरू मध्ये एक हो। यो प्रविधिले पाठ भित्रका अंक वा आकारहरू, अर्थात्, गणित समीकरणहरू, विराम चिह्नहरू, आदि पहिचान गर्दछ।
OWR, अर्कोतर्फ, अप्टिकल शब्द पहिचान हो र OCR को एक विस्तार हो। यद्यपि, क्यारेक्टरहरू पहिचान गर्नुको सट्टा, यसले छवि वा कागजमा लेखिएका शब्दहरू पहिचान गर्दछ।
OCR उपकरण छान्ने मानक
तपाईंले OCR उपकरण कसरी छान्नुपर्छ? यो रकेट विज्ञान होइन, वा यो हो? एक OCR उपकरणले तपाईंलाई धेरै विकल्पहरू अनुमति दिन्छ, तर केही OCR उपकरणहरू नि: शुल्क आउँदैनन्। यसबाहेक, यदि तपाइँ धेरै छविहरू स्क्यान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि यदि उपकरणले अनुमति दिन्छ भने।
यसबाहेक, यदि उपकरणले छविहरूलाई स्क्यान गर्न अनुमति दिँदैन भने के हुन्छ? के हुन्छ यदि यो PDF वा अन्य बुकलेट-स्टाइल कागजातहरूको लागि आदर्श हो? यी सबै व्यावहारिक प्रश्नहरू र हामीले यो सूची बनाउन प्रयोग गरेको मानक हो। त्यसोभए, यहाँ विचार गर्न चार महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्:
यदि एक उपकरण नि: शुल्क छैन भने, यो प्रयोग गर्न लायक पनि छ? यदि तपाइँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, तपाइँ एक महिना 100 छविहरू स्क्यान गर्न उपकरण खर्च गर्न सक्नुहुन्न। अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ एक व्यवसाय हुनुहुन्छ भने, तपाइँ एक महिनामा केहि छविहरू स्क्यान गर्न अनुमति दिन उपकरणमा सयौं डलर तिर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यी उपकरणहरू छान्दा नि:शुल्क प्रयोग पहिलो प्राथमिकता थियो।
एक समयमा स्क्यान गरिएका छविहरूको संख्या
केही उपकरणहरूले एक पटकमा एउटा छविलाई अनुमति दिन्छ, जबकि अरूले एक पटकमा 5, 10, वा 50 सम्म स्क्यान गर्न सक्छन्। त्यसकारण यी उपकरणहरू छनोट गर्ने प्राथमिकता भनेको स्क्यान गरिएका छविहरूको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सकेसम्म धेरैलाई अनुमति दिने कुरा खोज्नु थियो।
निकालिएको पाठको गुणस्तर
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, निकालिएको पाठको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु भनेको त्यस्तो उपकरण प्रयोग गर्नु ठीक होइन; धमिलो तस्बिरहरूबाट पनि, हामीले छानेका उपकरणहरूले छविहरू कुशलतापूर्वक निकाले। त्यसकारण यी उपकरणहरू तपाईंले आज प्रयोग गर्न सक्ने उत्तम हुनेछ।
पाठ निकाल्ने क्षमता (धमिलो वा हस्तलिखित छविहरूबाट)
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सबै उपकरणहरूले धमिलो वा असमान छविहरूबाट पाठ निकाल्न सक्दैनन्। यी उपकरणहरू मात्र गर्न सक्ने क्षमता छ। तसर्थ, तपाईंले निकाल्ने छविहरूको प्रकारको पर्वाह नगरी, तपाईंले ती सबैलाई तदनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
२०२२ मा फोटोहरूलाई टेक्स्ट फाइलहरूमा रूपान्तरण गर्नका लागि शीर्ष ५ अनलाइन उपकरणहरू
हामीसँग OCR मा जानकारी छ, हामीलाई थाहा छ यसले कसरी काम गर्छ, र त्यस्ता उपकरणहरू छनोट गर्ने जानकारी पनि। तसर्थ, थप ढिलाइ नगरी, २०२२ मा तस्बिरहरूलाई टेक्स्ट फाइलहरूमा रूपान्तरण गर्नका लागि उत्तम ५ अनलाइन उपकरणहरूको बारेमा कुरा गरौं:
Prepostseo.com छविबाट टेक्स्ट कन्भर्टर - उत्तम समग्र
PrePostSEO सँग लेखकहरू, मार्केटरहरू, व्यवसायहरूका लागि धेरै उपकरणहरू छन्। त्यसोभए, यो तर्कको लागि खडा छ कि तिनीहरूको छवि पाठ कन्भर्टरले यस सूचीलाई आज उपलब्ध उत्तम समग्र उपकरणको रूपमा नेतृत्व गर्दछ। यसले एक साधारण UI खेल्छ< यहाँ देखिए अनुसार:
यसको शीर्षमा, उपकरणले कुनै विशेष कठिनाइहरू प्रदान गर्दैन, जस्तै, नचाहिने क्याप्चा जाँचहरू, इत्यादि। यसले तस्बिरहरू स्क्यान गर्नको लागि फाइललाई सम्पादकमा ड्र्याग र ड्रप गर्न मात्र आवश्यक छ। त्यसपछि, तपाईं रोबोट हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्, जस्तै:
यस बिन्दुमा, तपाईंको छवि निकाल्नको लागि तयार छ, र उपकरणले यसबाट पाठ प्रतिलिपि गर्न धेरै समय लाग्दैन। चाँडै, तपाईंले आफ्नो सम्पादन योग्य पाठ हेर्नुहुनेछ, जस्तै:
उपकरण छविहरूबाट पाठ निकाल्ने बिजुली-छिटो छ, यहाँ देखिए जस्तै। यसबाहेक, तपाइँ पाठ प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ वा TXT वा DOCX फाइलको रूपमा पाठ निकाल्न सक्नुहुन्छ।
ड्र्याग एण्ड ड्रप
गुगल ड्राइव समर्थन
आज उपलब्ध कुनै पनि अन्य उपकरण भन्दा छिटो
ब्राउज गर्नुहोस् वा फाइलहरू आयात गर्नुहोस्
नि: शुल्क संस्करणमा धेरै विज्ञापनहरू छन्
Imagetotext.जानकारी - सजिलो र सुविधाजनक
ImageToText.Info ले सबैभन्दा उन्नत IWR र ICR तत्वहरू प्रयोग गर्दछ, र यो यसको उपकरणमा स्पष्ट छ। जब तपाइँ वेबसाइट खोल्नुहुन्छ, तपाइँलाई एक सरल UI डिजाइनको साथ स्वागत गरिन्छ, जस्तै:
रङ टिन्टहरू र यस उपकरणको बारेमा सबै कुरा आँखामा सजिलो छ। त्यसोभए, यदि तपाईं राति अबेरसम्म काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यो उपकरण तपाईंको लागि उपयुक्त छ। यसले समान ड्र्याग र ड्रप विकल्प खेल्छ, वा तपाईले सामग्री निकाल्न चाहनुभएको छविको लागि ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले गरेपछि, छवि अपलोड हुन्छ, र तपाईंले एक पटक फेरि प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि तपाईं रोबोट हुनुहुन्न। त्यस पछि, उपकरणले सबैभन्दा लामो छविहरूबाट पनि पाठ निकाल्न 10 सेकेन्ड मात्र लिन्छ। यहाँ तपाईंले अर्को के देख्नुहुन्छ:
तपाइँ या त क्लिपबोर्डमा सामग्री प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ वा कागजातको रूपमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। वा, यदि तपाइँसँग स्क्यान गर्न थप कागजातहरू छन् भने तपाइँ फेरि जान सक्नुहुन्छ। यो व्यवहार्य उपकरणले कम्तिमा केहि भन्दा बढी प्रस्ताव गर्दछ। त्यसैले, यो सजिलो र छिटो प्रयोगको लागि आदर्श छ।
एक छवि प्रयोगको लागि आदर्श
डिजाइन आँखा मा सजिलो छ
कुनै पनि अहिले सम्म छैन
ocr.best - बहुउद्देश्यीय उपयोग
FreeOnline.OCR, वा OCR.best लेखकहरू, मार्केटरहरू र व्यवसायहरूका लागि एक उल्लेखनीय उपकरण हो। यो सूचीको पहिलो उपकरण मध्ये एक हो जसले ड्रपबक्सलाई समर्थन गर्दछ। उपकरणको डिजाइन पोस्ट-आधुनिक फिल्म सेटबाट सीधा केहि देखिन्छ, जस्तै यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ:
फेरि, हामी पहिलेका उपकरणहरू जस्तै आधारभूत कुराहरू देख्छौं। यद्यपि, यसले यसलाई अझ राम्रो देखाउँदछ, किनकि यसले विवरणहरूमा ध्यान दिन्छ। एकचोटि तपाईंले तस्वीर अपलोड गरेपछि, तपाईंले आँखा-क्यान्डी एनिमेसन देख्नुहुन्छ:
त्यसपछि, उपकरणले तपाइँलाई प्रगति देखाउँदछ, जुन क्याप्चर गर्न साँच्चै गाह्रो छ किनभने उपकरणले यो धेरै छिटो गर्छ:
यो फ्ल्याश भित्र 1% देखि 100% सम्म जान्छ, त्यसैले यो स्क्रिनसट लिनको लागि हामीलाई धन्यवाद। त्यसपछि, तपाईंले आफ्नो निकालिएको पाठ यस आकारमा पाउनुहुन्छ:
एक पटक फेरि, उपकरणले तपाईंलाई कागजात वा txt फाइलको रूपमा फाइल डाउनलोड गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यस उपकरणलाई छिटो पाठ निकाल्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक आदर्श साथी बनाउँदै।
UI प्रयोग गर्न सजिलो
IWR लाई राम्ररी रोजगार दिन्छ
खेलकुद सजिलो र आकर्षक UI
आकर्षक UI ले केही कम्प्युटरहरूमा यसलाई ढिलो बनाउन सक्छ
SodaPDF को अनलाइन OCR - ठूला कागजातहरूको लागि
SodaPDF को अनलाइन OCR छवि वा PDF निकासीको लागि आदर्श हो। यो उपकरण लामो ढाँचाहरूबाट पाठ प्रतिलिपि गर्ने जस्ता प्रयोगहरूको लागि उल्लेखनीय छ, जस्तै PDF वा स्क्यान गरिएका कागजातहरू। तपाईंले वेबसाइट भ्रमण गर्दा यहाँ के देख्नुहुन्छ:
जबकि उपकरणले PDF फाइलहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, यसले छविहरू स्क्यान गर्न पनि सक्छ। जब तपाइँ एउटा छान्नुहुन्छ, तपाइँ अर्को के देख्नुहुनेछ यहाँ छ:
त्यसपछि, तपाईंले आफ्नो सम्पादन योग्य पाठ हेर्नु अघि यसले केही सेकेन्डभन्दा कम समय लिन्छ।
भरपर्दो पीडीएफ कनवर्टर
ठूला PDF फाइलहरूलाई सजिलै रूपान्तरण गर्दछ
छविहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ
कहिलेकाहीँ बग्गी कार्य गर्न सक्छ
DocSumo को नि: शुल्क अनलाइन OCR स्क्यानर - द्रुत प्रयोगको लागि
यदि तपाईं कठिन तस्बिरहरूबाट पाठ निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ र यसलाई छिटो गर्न चाहनुहुन्छ भने DocSumo को नि:शुल्क अनलाइन OCR स्क्यानर तपाईंको लागि हो। यहाँ उपकरण कस्तो देखिन्छ:
एकचोटि तपाईंले उपकरणमा छवि दिनुभयो, यसले पाठ निकाल्नु अघि तपाईंलाई टाइमर देखाउँदछ, जस्तै:
यो धेरै सुविधाजनक छ, किनकि यसले तपाईंलाई लामो समय लाग्न लागेको बताउँछ।
तपाईको फाइलको टेक्स्ट एक्स्ट्र्याक्ट भएपछि तपाईले यो विकल्प देख्नुहुन्छ। "लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर र यसलाई खोल्दा, तपाईंले के देख्नुहुन्छ यहाँ छ:
पाठ एक अनलाइन सम्पादक मा प्रस्तुत गरिएको छ। जसले यसलाई द्रुत प्रयोग र सम्पादनको लागि अत्यधिक सुविधाजनक उपकरण बनाउँछ।
तपाईंलाई पाठ सम्पादन वा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ
फोटोहरूलाई पाठ फाइलहरूमा रूपान्तरण गर्न OCR उपकरणहरू कसले प्रयोग गर्नुपर्छ?
पाठ गर्न छविहरू चाहिने सबैले OCR उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ। यद्यपि, आज जीवनको प्रत्येक विशिष्ट पक्षलाई एक प्रकारको सम्पादन योग्य पाठ वा अर्को चाहिन्छ। त्यसकारण, तपाईंलाई यो विचार बुझ्न मद्दतको लागि, यहाँ चार प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जसले OCR उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ:
आज व्यवसायहरूको लागि OCR प्रयोग गर्ने प्रमुख फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि यसले उनीहरूलाई कार्य दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। एक कर्मचारीको लागि, जससँग सामग्री निर्माणको लागि सबै आवश्यक उपकरणहरू छन्, OCR ले उनीहरूलाई मनोबल बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यसले अनावश्यक कागजी कार्यहरूबाट छुटकारा पाउँछ र अनलाइन भण्डारण र भर्चुअल डेटा केन्द्रहरू जस्ता महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुहरूमा पहुँच सुधार गर्दछ। यसले डाटा स्वचालनलाई सजिलो बनाउँछ र माइलले दक्षता बढाउँछ।
मार्केटरहरूलाई द्रुत र सुविधाजनक सामग्री सिर्जना चाहिन्छ। यसको लागि, तिनीहरू अन्य प्रकारका छविहरू वा पाण्डुलिपिहरू प्रयोग गर्छन्। त्यो बेला OCR काममा आउँछ, किनकि यसले तिनीहरूलाई मार्केटिङ उद्देश्यका लागि सम्पादन योग्य पाठ प्रदान गर्दछ।
विद्यार्थीहरूले OCR प्रयोग गर्दा सायद सबैभन्दा धेरै फाइदाहरू छन्। यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको अध्ययन गुणस्तर सुधार गर्न र तिनीहरूलाई द्रुत र प्रभावकारी रूपमा सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसबाहेक, पुस्तकहरू र अन्य अध्ययन सामग्रीहरूबाट पाठ प्रयोग गरेर OCR द्वारा अझ सजिलो बनाइएको छ।
व्यावसायिक लेखकहरू, जस्तै SEO वा अनलाइन मार्केटिङमा कोही, एक ठूलो हदसम्म OCR उपकरण प्रयोग गर्न सक्छन्। अनुपलब्ध डेटा प्रयोग गर्नदेखि लिएर सम्भावित पाण्डुलिपिहरूबाट जानकारी निकाल्न, एक पेशेवरका लागि सम्भावनाहरू अनन्त छन्।
त्यहाँ तपाईंसँग छ, तपाईंले आज प्रयोग गर्न सक्नुहुने पाँचवटा उत्कृष्ट उपकरणहरू, र तिनीहरूले जीवनका निम्न पक्षहरूमध्ये प्रत्येकलाई कसरी फाइदा लिन सक्छन्। त्यसकारण, तपाईंले खोजिरहनु भएको फाइदा प्रदान गर्ने उपकरण छान्नुहोस्, र आफूलाई उपयुक्त लागे अनुसार पाठ निकाल्नुहोस्।
← शुरुवातकर्ताहरूको लागि व्यावसायिक देखिने भिडियोहरू बनाउनका लागि 10 सुझावहरू
तपाईंको ब्रान्डको आवाज कसरी विकास गर्ने (र कायम राख्ने) →